Rossie II | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Arts & Humanities » Rossie II	20
Posted by ムラカミ on Jul 10, 2015 in Arts & Humanities, Know-How, DIY, Photography | 20 comments
တနေ့က နှင်းဆီပန်း အနီရဲရဲ ရိုက်ပြီး သကာလ..
ဈေးကိုရောက်တော့ နှင်းဆီပန်း ပုစွန်ဆီရောင်ခေါ်မလားဗျာ… အဖူးလေး ဖော့ပိုက်ကွန်စွပ်ထားတာ တွေ့လို့ ၀ယ်ခဲ့ပါတယ်။
သူတို့ကတော့ မိတ်ကပ်ရောင် ခေါ်သားဗျ…။ ကြိုက်သလိုခေါ်ပါဗျာ… အရောင်ကတော့ သည်အရောင် ဆိုတာ ပြချင်တာပါ။
ဂလိုနဲ့ အိမ်ရောက်တော့ ရေဆွတ်ပြီး ပန်ကာနဲ့ မှုတ်လိုက်တာ မကြာဘူး ပွင့်ပါရောလား။
ပွင့်လာတော့လည်း အပွင့်အရောင်က ပုံမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်း မူလအရောင်ပဲဗျ။
(ဒါ ပထမနေ့ ညနေနဲ့ ညဘက်ရိုက်ထားတဲ့ပုံတွေဗျ)
ပထမဆုံးပုံက reflector ပြား နောက်ခံထားပြီး ရိုက်ထားတဲ့ပုံပါ။ Grey BG လိုချင်လို့ ဆိုပါတော့။
ဒုတိယပုံကတော့ Reflector နောက်ကနေ Christmas Light ကို ထားပြီး အပြာခံ ရိုက်တယ် ဆိုပါတော့ဗျာ။
တတိယပုံကလည်း ထိုနည်းလည်းကောင်းပေါ့…။ ဒေါင်လိုက်နဲ့ အလျားလိုက်ကလွဲရင် ဘာဆို ဘာမှ မကွာ
သည်ပုံကတော့ အစိမ်းခံရိုက်ချင်သမို့ ပန်းထိမ်ငိုပန်းတွေရဲ့ အရွက်တွေကြား ထည့်ရိုက်မိတယ်။
သည်အရွက်တွေက အစင်းကြောင်းတွေ လိုင်းတွေ ပါဝင်တယ် မဟုတ်လား။ ဒီ texture တွေဟာ ပွင့်ချပ်တွေရဲ့ နူးညံ့မှုနဲ့ဆို
ပြောင်းပြန် အားဖြင့် အားပြုမယ် ယူဆလို့ပါ။
သည်ပုံကတော့ Black BG နဲ့ သူ့ချည်း သပ်သပ် ခွဲထုတ်ရိုက်ထားတာပါ။
ဒါတော့ Bokeh Adapter ဆော့ထားတာ။ ထူးထူးဆန်းဆန်းတော့မဟုတ်ဘူး။
ဒါက ဒုတိယနေ့ပါ ခင်ဗျ။
ပန်းက အပြည့်အ၀ ပွင့်သွားပါပြီ။
အဲ့သည်မှာပဲ ဇာတ်လမ်းက စပါတယ်။
ဟုတ်ပါတယ် မနေ့က ပုစွန်ဆီရောင် နှင်းဆီဟာ သည်နေ့မှာ ပန်းရောင်ဖြစ်သွားတာပါ။
သည်ပုံကတော့ အပြင်ထွက်ရိုက်ထားတာပါ။ ဘောင်တခုပေါ်က သံစကာကွက် အစွန်းကို ချိတ်လို့ ရိုက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ဘက်က ခပ်မှိုင်းမှိုင်းက သံချေးတက်နေတဲ့ သွပ်ပြား ၀ါးသွားတာပါ
နောက်ထပ် တပုံကလည်း အလားတူပါပဲ။
သည်တခါတော့ အစိမ်းရောင် BG လိုချင်လို့ စံပယ်ရုံက အရွက်တွေ နောက်ခံထားပါတယ်။
မနက်ခင်း နေရောင်ဟာ အ၀ါသွေးများပါတယ်။
ဒါကြောင့် လိမ္မော်ရောင်သွေး ကျန်နေသေးသလို ခံစားရတာပါ။
အောက်က ၃ပုံကတော့ သေချာချင်လို့ အမည်းရောင်ခံလို့ စမ်းရိုက်ကြည့်တာဖြစ်ပါတယ်။
အမည်းရောင် အခံမှာ ပန်းရောင်သွေး ဆိုတာ ပိုသိသာပါတယ်။
ဒါကတော့ Indoor ဖြစ်သွားပါပြီ။
အမည်းသက်သက်တွေ ရိုက်ရတာပျင်းလာလို့ ကျနော် သည်ပုံမှာ smoke သုံးထားပါတယ်။
ဒုတိယပုံမှာ ပိုသိသာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပထမပုံကို ပိုနှစ်သက်ပါတယ်။
မီးခိုးကြားက ပန်းပွင့်ပုံမပြချင်ဘဲ haze ကြားက ပန်းပွင့် သက်သက်ပုံကိုပဲ လိုချင်လို့ပါ။
ဖူးတုန်းက လိမ္မော် ပွင့်တော့မှ ပန်းရောင် ဖြစ်တဲ့ နှင်းဆီ အကြောင်း ကျနော်လည်း မတွေးတတ်တော့ပါဘူး။
သူတို့ သုံးထားတဲ့ ဆေးတွေ … အလင်းရောင် Photons .. ရေ နဲ့ ပွင့်လွှာကိုယ်တိုင်မှာ ပါဝင်တဲ့ ရောင်ချယ်ပစ္စည်းတွေ
ကန်မီကယ် သဘောအရ ဘယ်လို ဓာတ်ပြုတယ် ဆိုတာ တော့ မရှင်းပြတတ်သမို့…
မြင်တာ မြင်တဲ့အတိုင်းပဲ ရိုက်ခဲ့ပါတယ်။
ဂျက်စပဲရိုး says: ၁၀၊ ၁၁၊ ၁၂ ကြိုက်
haze ကြားထဲက နှင်းဆီက ပိုပြီး ထင်ရှားနေသလို ခံစားရ
@QUIL@ says: ကျုပ်ဘော်ဒါတယောက်ဆို haze ကိုပါ အရောင်ထည့်သဗျ…
တကယ့် အရောင်ပါတဲ့ haze ထွက်အောင် DIY လုပ်တာ
အရောင်ကတော့ သူရိုက်ချင်တဲ့ subject ကိုလိုက်လို့ ဆိုပါတော့
ဇီဇီခင်ဇော် says: နောက်ဆုံးး ဂီ လည်းး နှင်းဆီပါမောင် ဆို ပြီးး ဘွပျက်ကောာာာ
ဟို မပွင့်တဲ့ ပန်းးလေးးရော??
@QUIL@ says: ခုနောက်ပိုင်း mood က သစ်ခွ mood ဖြစ်သွားပြီဗျာ…
၀င့်ပြုံးမြင့် says: .ဒီလိုပဲ ဖြစ်ရမှာပေါ့။ ဘယ်သူ့ဆီက လက်ဆောင်ရတာလဲ
မြစပဲရိုး says: ပန်း ကလန်ဒါ ထုတ်ဖို့ ကောင်းတယ်။
ပန်းထဲ မှာ လူထိုင် နေတာ မျိုး တွေ လို ဖိုတိုရှော့ ကြည့်ပါလား။ :-)))
@QUIL@ says: ပန်းထဲ လူထိုင်တာက မခက်ဘူးအရီးရဲ့
ကနေ့ခေတ် photoshop တွေအစွမ်းကြောင့် လူပုံကို BG ကနေ ဖြတ်ထုတ်တာ
ဆံတပင်ချင်းအထိ လွယ်လွယ်နဲ့ မြန်မြန် ဖြတ်ထုတ်လို့ရနေပြီ။။။
ခက်တာက manipulate လုပ်တဲ့အခါ ဘယ်လို theme မျိုး ဘယ်လို အတွေးမျိုးနဲ့
ဘယ်လို ရောစပ်မလဲဆိုတဲ့ အိုင်ဒီယာ….
Ma Ei says: လိမ္မော် ဖြစ်ဖြစ် ပန်းရောင် ဖြစ်ဖြစ် အရောင်ငြိမ်လေး လှလိုက်တာ…
နှင်းဆီတွေ ပိုက်ကွန်ချွတ်ပြီးများဝယ်လာမိရင် ဈေးကနေ အိမ်မရောင်ခင် လမ်းမှာတင်ပွင့်ရော…
နှင်းဆီပန်းမက နှတ်ခမ်းနီပါ အိုက်အရောင်ကြိုက်တာရယ်…
@QUIL@ says: လက်ဖက်နှင်းဆီ ရောဂါဟောင်းပြန်ထနေသယ်ဗျာ…
ပြောမယ့်သာပြောတာ နှင်းဆီပန်းက ၀ယ်ရတာမတန်ဆုံးပဲ
တောင်ပေါ်သား says: ကင်မရာအသုံးအနှုန်း ၊ အယူအဆတွေတော့ နားမလည်ဘူးဗျ ၊
လက်ရာကတော့ မိုက်၏ ၊ ကျော့်မင်ဂါဆောင်ကြရင် ခေါ်မယ်နော် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12186
Alinsett @ Maung Thura says: .အနော်နဲ့ ဖွေးဖွေးနဲ့ ယင်မနားလုပ်တမ်း ကစားနေတဲ့ ပုံလေးတွေလည်း ရိုက်ပေးစေချင်သေးတာ
@QUIL@ says: ဆက်ဆက် ဆိတ်ပါရင်
ငလျှင်လှုပ်လို့ ပန်းအိုးကျ ကွဲတဲ့အခန်း ပြန်ရိုက်မယ်လေ…
စိတ်ကြိုက် ပုံတွေရအောင် … တကယ်မရိုက်ခင်မှာ
ဓာတ်ဆြာကိုယ်တိုင် ကိုယ်ဖိရင်ဖိ အားပါးတရ အသွေးထဲ အသားထဲကနေ
လှေခွက်ကြီးကျန် အလံမလှဲစတမ်း ရီဟာဇယ် သရုပ်ပြပါ့မယ်။
၀င့်ပြုံးမြင့် says: .ဒါရိုက်တာ စိတ်ကူးညံ့တယ်။ အိမ်ပြိုသွားတဲ့ပုံ ရိုက်ပြရမှာကို။
@QUIL@ says: အူးလေး ရာ …
အခုဘ၀ကြီးမှာ သမုဒ္ဒယမီးတွေ ရှာဦးမလို့လား..
(တန်ဆေး၊ လွန်ကောင်း၊ များ ဗဲဒီးဂွတ်)
လုံမလေးမွန်မွန် says: ၁၀ ကို အကြိုက်ဆုံးပါပဲရှင်…
@QUIL@ says: ကျနော်လည်း နှစ်သက်တယ်ဗျ…
haze မဟုတ်ဘဲ တခြား နည်းနဲ့ ဖန်တီးလို့ရသေးတယ်..
gradient တမျိုးမျိုး သုံးပြီးတော့ပေါ့…။
​ဒေါ် လေး says: ၄ ပုံကို ကြိုက်တယ်
@QUIL@ says: တိုင်းခယု ပါဗျ
Ma Ma says: စကြည့်ကြည့်ချင်း နံပါတ် ၁ ပုံကို ကြိုက်တယ်။
ကြည့်ရင်းကြည့်ရင်း တစ်ပုံပြီးတစ်ပုံ ကြိုက်လာလိုက်တာ…..
အောက်ဆုံးပွင့်ဖတ်တွေ တစ်ဖတ်ချင်းဖြစ်နေတဲ့ပုံလည်း ကြိုက်တာပဲ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 23
warsojuly says: နံပါတ်၆နဲ့၁၂ကြိုက်တယ်..